Dhinacyada iyo tabaha lagu ogaado sida loo noqdo qurux badan | Ragga Stylish
Sida loo noqdo qof qurux badan
Nasiib darrose, wejiga aan ku dhalannay waa midka aan nolosha ku yeelan doonno. Waxaan aadi karnaa qolka jimicsiga oo aan shaqeyn karnaa jirkeena, qaabeyn karnaa, kordhi murqahayaga, iwm Sikastaba, ma sameyn karno "waji." Laakiin tani maahan sabab aan ugu oggolaano nafsadeena inaan ka adkaano wajigii aan u adkeysan lahayn. Waxaa jira tilmaamo aan raaci karno si aan ugu ekaano wax soo jiidasho leh adoon u noqonin kuwo qurux badan
Qodobkaan waxaan ku baran doonnaa sida loo noqdo qof qurux badan iyadoo qaar ka mid ah tabaha quruxsan fudud. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato? Sii wad akhriska.
1 Dabeecad wanaagsan iyo qofnimo
2 Dhinacyada dibedda
3 Samee qaabkaaga
4 Nadaafad shaqsiyeed
Dabeecad wanaagsan iyo qofnimo
Inaad qurux badnaato kaliya ma ahan inaad yeelato weji kaamil ah oo buuxiya isku ekaanta saamiga dahabiga ah (eeg Ragga ugu quruxda badan adduunka). Waad soo jiidan kartaa oo aad xiiseyn kartaa dadka kale adigoon u baahnayn inaad qurux badnaato. Jidka wajigaaga maahan waxa kaliya ee soojiita dareenka qofka kana dhiga qof soo jiidasho leh. Sidaa darteed, kuma filna oo kaliya inaad wanaag u ekaato oo aad yeelato dhoolla-caddayn il-qabad leh.
Dabeecadda qofka ayaa si aad ah u go'aamineysa xaaladda noocan ah. Ma ahan oo keliya inaad yeelato aragti qumman, laakiin inaad awood u leedahay inaad xalliso dhibaatooyinka oo aad kor u kacdo La wadaagida daqiiqadahaaga ugu fiican dadka kale oo aad daryeesho waa wax soo jiita dadka kale. Si loo muujiyo shakhsiyad soo jiidasho leh iyo dabeecad togan, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad naftaada aaminto. Xitaa haddii aadan sidaas u qurxooneyn, waxaad ku deeqi kartaa wanaag badan oo dadka ah iyo, wixii ka sarreeya, Waa inaad iska hubisaa naftaada oo aadan ka baqin "maxay odhan doonaan."
Dharka, timaha iyo sida aad nadiif u tahay ayaan kaa caawin karin inaad naftaada ku kalsoonaato. Waa inaad ogaataa waxa xuduudahaagu yihiin iyo waxaad awoodid. Inaadan ka xishoonin inaad muujiso sida aad tahay, hiwaayadahaaga iyo shakhsiyaddaada guud ahaanba waa muhiimad aad u weyn si dadka kale ay fikrad wanaagsan kaaga qabaan. Ha iloobin in kalsoonida naftaada aan la been abuuri karin, maadaama lagu qasbi doono. Waa inay ka timaaddaa gudaha oo gebi ahaanba daacad noqotaa.
Horumarinta tikniyoolajiyadda iyo isbeddelkeenna qaab nololeedka awgood, waxaan u baranay inaan yeelano jagooyin aan caafimaadka u fiicnayn. Waxaan si joogto ah u garaaceynaa oo aan saacado iyo saacado ku qaadaneynaa qaabab xun oo hor yaal shaashadaha qarsoon. Salaaxiddu kaliya kuma keento dhibaatooyinka dhabarka mustaqbalka fog, waxay kaa dhigaysaa inaad u muuqato nin aan lahayn isku kalsoonaan iyo fududahay in laga adkaado.
Si toosan u fadhiisasho ama toos u socosho waxay si dadban u muujin kartaa isku kalsooni. Waxyaabaha noocan ah waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin luqad aan hadal ahayn. Waa mid iskeed isu gudbisa iyadoon loo baahnayn ereyo. Nin qumman ayaa asal ahaan asal ahaan awood u leh gudbinta amniga iyo geesinimada.
Muuqaal kale oo muhiim ah oo dibadda ah waa dhoolla caddaynta. Sida iska cad waa inaadan u dhoola cadeyn si qasab ah hadaadan dareemin. Si kastaba ha noqotee, dhoollacaddayntu waxay inta badan qofka ka dhigtaa mid u muuqda mid faraxsan, kalsooni leh, iyo mid soo baxa Intaas waxaa sii dheer, waa wax fiican in laga hortago inay ku arkaan iyagoo daallan maalinba maalinta ka dambeysa ama shaqadaada ama haddii aad murugooto.
Markaad qof la hadlayso, waa inaad isaga fiirisaa isha. Marka laga reebo xaqiiqda ah inay tahay arrin waxbarasho, waxay ku tusi doontaa inaad isku kalsoon tahay iyo inaad naftaada ku kalsoon tahay. Sidoo kale maaha arrin ku saabsan indha indhaynta qofka. Waxaa ugufiican in iyada indhaha laga fiiriyo, aakhirkana jaleecaayo qeybaha kale ee wajigeeda sidoo kale.
Dharku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah wajiga aad ku tusi doontid dadweynaha hortooda. Waa muhiim in qaabkaagu yahay mid kuu gaar ah oo aadan aakhirka u isticmaalin hababka dadka kale u labistaan. Qaabka dharku muhiim uma aha sidaad u xidhato. Waa lama huraan in, haddii aad tahay da 'gaar ah, laguma talin karo inaad u labisto sida dhalinyarada, maxaa yeelay waxaad kaliya muujineysaa inaad tahay qof isku dayaya inuu soo ceshado dhalinyaro lumisay.
Haddii aadan aqoon sida loo hirgeliyo qaabkaaga, si fiican u eeg dadka kale. Hal talo ayaa ah in haweenku ay xoogaa ilaaliyaan kabaha dadka. Si kastaba ha noqotee, tani waa dhinac yar oo ay tixgeliyaan dadka dhaadheer. Hubso inaad doorato nooc kabo ah oo fiican oo u dhigma inta ka hartay dharkaaga.
Haddii aad ka mid tahay dadka aan aqoon sida loo xusho dharka, laakiin haysta lacag ay ku dhaafaan, waxaad kireysan kartaa dukaameysi shaqsiyeed. Dadkani guud ahaan waxay aad ugu xeel dheer yihiin helitaanka qaabka dadka kale. Waxaad isaga siin doontaa lacag si uu u doorto dharka ugu fiican si kor loogu qaado qaabkaaga.
Qalabka ayaa inta badan muhiim u ah sida dharka intiisa kale. Giraan, suumanka, canqowga, iwm. Waa cunsurro siyaado ah oo isbeddel ku samayn kara dadka kale. Waxaa lagugu garan karaa inaad tahay ninka had iyo jeer qaata jijin gaar ah. Ha ilaawin inaad si wanaagsan ula hadasho oo aad ugu dhawaaqdo dhammaan ereyada si aad u xiiso badan qofka ku dhageysanaya.
Inaad qurux badnaato kuma koobna oo kaliya dharkaaga iyo shakhsiyaddaada. Nadaafadda shaqsiyeed waa qodob go'aaminaya haddii aan dooneyno inaan soo jiidasho yeelano. Waayo, ilaalinta ciddiyahaaga iyo gacmahaaga nadaafaddu aad ayey muhiim u tahay. Kahor intaadan wax cunin, aadan bixin ama aadan galin meel, waxaa fiican inaad raacdo gacmahaaga oo la dhaqo oo cidiyahaagana la jarjaro oo la nadiifiyo.
Timo shanleynta iyo dhaqida timaha sidoo kale waa dhinac kale oo muhiim ah. Waxaan kuu xaqiijinayaa in qof timo dufan leh oo si xun u shanlay uu sameeyo aragti aad u xun. Maydhista timahaaga labadii maalmoodba mar isla markaana daweynta qolofta iyo / ama saliida haddii aad leedahay waa wax wax badan ka caawinaya. Neefsashada ayaa ah dhinac kale oo laga fiirsado. In ilkahaaga la nadiifiyo oo ur cusub la helo waxay kaa dhigeysaa inaad dareento isku kalsooni badan markaad dadka la hadlayso.
Ugu dambeyntiina, nadiifinta iyo xiirashada waa ikhtiyaar kale oo macquul ah oo aad u qurux badan.
Waxaan rajeynayaa in tilmaamahan oo dhan ay kaa caawin karaan inaad ogaato sida loo noqdo qof qurux badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida loo noqdo qof qurux badan
Dhexda iska yaree ragga
Kondhomyada Mercadona, lagu kalsoon yahay?